के मि व्यापारिक कार्डहरू तपाईले पाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि अधिक मूल्यमा छन्? - Print Peppermint
डिसेम्बर 4, 2019 | विज्ञापन, मुद्रण
ब्यापार कार्डहरूले तपाईंको छवि बजारमा सेट गर्न सक्दछ। चाहे तपाईको सानो व्यवसाय छ वा तपाई व्यावासायिक टाइकुन हुनुहुन्छ, व्यापार कार्ड तपाईको व्यवसायको अनुहार हो। धेरै कम्पनीहरूले उचित मूल्यमा उत्तम प्रकारका कार्डहरू प्रदान गर्छन्। Print Peppermint यस्तो कम्पनी हो जसले उत्तम प्रकारको कार्डहरू प्रदान गर्न सक्छ जुन डिजाइनर कार्डहरू प्रदान गरेर तपाईंको व्यवसायलाई जोड दिन सक्दछ।
यो व्यापार कार्ड को कम्पनीहरु आउँदा, Print Peppermint प्रतिस्पर्धा को शीर्ष मा हुनेछ। Moo व्यवसाय कार्ड ग्राहकहरु र ग्राहकहरु लाई आकर्षण प्राप्त गर्न को लागी पनि धेरै उपयोगी छ। यद्यपि मू व्यवसाय कार्डमा त्यहाँ धेरै कमजोरीहरू छन् जसले यस कार्डको लोकप्रियतामा बाधा पुर्‍यायो। मुख्य नुकसान Moo व्यवसाय कार्डको मूल्य ट्याग हो जुन प्राय: मानिसहरूलाई यसबाट टाढा राख्छ।
Moo व्यवसाय कार्डहरू सस्तो छैनन्। साटोमा, ती अत्यधिक महँगो हुन्छन् र साना व्यवसाय मालिकहरूको पहुँचबाट टाढा हुन्छन्। यदि तपाईं हरियो विकल्पको लागि जानुहुन्छ भने यो एकदम थोरै महँगो हुन्छ। थोरै संख्यामा कार्डहरू व्यवसाय मालिकहरूलाई भारी खर्च हुनेछ। अब, कुरा यो हो जब तपाईं मु बिजनेस कार्डहरूको लागि जानुहुन्छ, तपाईं पर्याप्त रकम तिर्नुहुन्छ, तर त्यो गुणस्तरसँग मेल खाँदैन। यसको सट्टामा, तपाईं व्यवसाय कार्ड खरीद गर्न सक्नुहुनेछ Print Peppermint जहाँ विकल्प विविध छ, र तपाईं आर्थिक दरहरूमा बिभिन्न कार्डहरू पाउन सक्नुहुन्छ।
ब्यापार कार्डहरू तपाईंको पहुँच बढाउनका लागि योग्य छन्। यद्यपि तपाईको व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि धेरै लगानी छन्। तसर्थ, जहाँ तपाईं लगानी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। चाहे तपाई एकल पक्षीय वा डबल पक्षीय कार्डको साथ पेशेवर लुक र ग्राफिक्स डिजाइन चाहानुहुन्छ, तपाईले ब्यबारी कार्ड प्रदायक भेट्न सक्नुहुन्छ जस्तो Print Peppermint जसले किफायती दरमा गुणस्तर उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ। यसका साथै कम्पनीले गोलाकार कुनाहरू, घेरा, वर्ग, साबर, डाइ-कटि cutting र एम्बोसिंगको साथ कार्डहरू पनि प्रदान गर्दछ। यसका साथै तपाई विभिन्न प्रकारका डिजाइन र सामग्रीहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि उचित मूल्यमा कार्डहरूको गुणवत्ता प्रमाणित गर्न नमूना प्याक अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसोभए, अब तपाईंलाई थाहा छ किन मू व्यापारिक कार्डहरू त्यति लोकप्रिय छैनन्। उनीहरूले उत्पादनको प्रस्ताव गर्दैनन् किन उनीहरू चार्ज गर्छन् जब कि यो हुने छैन Print Peppermint। अन्त्यमा, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाई आफ्नो अनलाइन उपकरणहरूमा उपलब्ध डिजाइनमार्फत सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ Print Peppermint। अब तपाईंको व्यवसाय कार्ड छ र तपाईंको व्यापार फैलाउनुहोस्।
← नि: शुल्क व्यापार कार्ड ... किन उनीहरुले चूस गर्छन् र तपाईले आफ्नो समय बर्बाद गर्नु हुँदैन
के "मेरो नजिकको व्यापार कार्ड" राम्रो विचार छ? →